कम्पास - विकिपिडिया
कम्पास (Compass)ले दिशाको ज्ञान गराउँछ। कम्पासलाई दिक्सूचक पनि भनिन्छ।
चुम्बकीय दिक्सूचक उत्तरी ध्रुवको दिशातर्फ सङ्केत गर्दछ। (ठीक-ठीक भन्नु हो भनें चुम्बकीय उत्तरी ध्रुव)।
दिक्सूचक महासागरहरू र मरुस्थलहरूमा दिशानिर्देशनका धेरै काम आउँछ, वा ती स्थानमा पनि जहाँ स्थानसूचकहरूको कमी हुन्छ।
सबैभन्दा पहिला दिक्सूचकको आविष्कार चीनका हान राजवंशले गरेको थियो। यो एक ठूलो चम्मच जस्तो चुम्बकीय वस्तु थियो जो काँसाको तस्तरीमा मैग्नेटाइट अयस्कलाई बसाएर बनाइएको थियो।
दिक्सूचकको प्राथमिक कार्य एक निर्देश दिशातर्फ सङ्केत गर्नु हो, जसदेखि अन्य दिशाहरू ज्ञात गरिन्छन्। ज्योतिर्विदहरू र पर्यवेक्षकहरूका लागि सामान्य निर्देश दिशा दक्षिण हुन्छ एवं अन्य व्यक्तिहरूका लागि निर्देश दिशा उत्तर हुन्छ।
१.३ चुम्बकीय दिक्सूचक
१.४ नाविक दिक्सूचक (Mariner's Compass)
१.५ दिङ्‌मान (Bearing)
१.६ द्रव दिक्सूचक
१.७ शुष्कपत्रक अथवा टमसन दिक्सूचक
१.८ घूर्ण चुम्बकीय दिक्सूचक
१.९ घूर्णाक्ष दिक्सूचक
१.१० रेडियो दिक्सूचक
१.११ सूर्य अथवा तारा दिक्सूचक
यदि भू-समान्वेषकहरूका पथप्रदर्शनका लागि दिक्सूचक न हुन्थ्यो भनें तिनको जल एवं स्थल यात्राहरू असम्भव हुन जान्छ। विमानचालकहरू, नाविकहरू, गवेषकहरू, मार्गदर्शकहरू, पर्यवेक्षकहरू, बालचरहरू एवं अन्य व्यक्तिहरूलाई दिक्सूचकको आवश्यकता हुन्छ। यसको उपयोग जल वा स्थलमा यात्राको दिशा, कुनै वस्तुको दिशा एवं दिङ्‌मान ज्ञात गर्न र विभिन्न अन्य कार्यहरूका लागि गरिन्छ।
यो अबसम्म विदित छैन कि दिक्सूचकको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गर्‍यो। अति प्राचीन कालमा चीनिहरू द्वारा दिक्सूचकको प्रयोग गरिने कथा कदाचित्‌ एक कल्पित आख्यान नैं छ। यस्तो भनिन्छ कि २,६३४ ईसवी पूर्वमा चीन देशका सम्राट् "ह्वाङ्‌गटी'का रथमा दक्षिण दिशा प्रदर्शित गर्नका लागि एक यन्त्रको व्यवस्था रहन्थ्यो। यसको पनि सम्भावना छ कि अरबवासिहरूले दिक्सूचकको उपयोग चीनिहरूदेखि नैं सिकिएको हो र यसले नैं यूरोपमा प्रचलित गरेको हो।
यूरोपीय साहित्यमा दिक्सूचकको प्रथम परिचय १२०० ईसवीमा अथवा यसको उप्रान्त नैं मिल्दछ। सन्‌ १४०० ईसवीका उप्रान्तदेखि यस यन्त्रको उपयोग नौचालन, विमानचालन एवं समन्वेषणमा अत्यधिक बढेको हो। नाविक दिक्सूचक अत्यधिक समयसम्म ठूला नैं अपरिष्कृत यन्त्र थियो १८२० ईसवीमा बार्लोले चार पाँच समान्तर चुंबकहरूले युक्त एक पत्रक (card)को सूत्रपात गर्‍यो। सन्‌ १८७६मा सर विलियम टमसन (लार्ड केल्विन)ले आफ्नो शुष्क पत्रक दिक्सूचक (Dry card compass)को निर्माण गर्‍यो। सन्‌ १८८२मा द्रवदिक्सूचकको निर्माण भयो।
दिक्सूचक मुख्यत: चार प्रकारका हुन्छन् :
(१) चुम्बकीय दिक्सूचक (Magnetic Compass) - यो निदेशक बल प्राप्त गर्नका लागि पृथ्वीका चुम्बकीय क्षेत्रमा निर्भर गर्दछ।
(२) घूर्णदर्शीय दिक्सूचक (Gyroscopic compass) - यो पृथ्वीका घूर्णनदेखि आफ्नो निदेशक बल प्राप्त गर्दछ।
(३) रेडियो दिक्सूचक (Radio compass) - यसको कार्यप्रणाली बेतार सिद्धान्तमा आधारित छ।
(४) सूर्य अथवा तारा दिक्सूचक (Solar or Astral compass) - यसको उपयोग सूर्य अथवा कुनै ताराहरूका दृष्टिगोचर भएमा निर्भर गर्दछ।
चुम्बकीय दिक्सूचक[सम्पादन गर्ने]
चुम्बकीय दिक्सूचक क्षैतिज दिशा ज्ञात गर्ने यन्त्र हो। यस यन्त्रका साधारण रूपमा एक चुम्बकीय सियो हुन्छ, जो एक चूलका माथि यसरी संतुलित रहन्छ कि त्यो पृथ्वीका चुम्बकीय क्षेत्रको क्षैतिज दिशामा घूमनका लागि स्वतन्त्र हुन्छ।
"समान ध्रुवहरूमा परस्पर प्रतिकर्षण र असमान ध्रुवहरूमा परस्पर आकर्षण हुन्छ', यही चुम्बकीय दिक्सूचकको सिद्धान्त छ। तदनुसार, आफ्नो गुरूत्वकेन्द्रदेखि स्वतंत्रतार्पूक लटकाई भएको चुम्बकीय सुई, क्षेतिज समतलमा उत्तर र दक्षिणतर्फ सङ्केत गर्दछ, किनभनें त्यसमा पृथ्वीका चुम्बकीय क्षेत्रको क्षैतिज संघटक कार्य गर्दछ।
यसमा निम्नलिखित त्रुटीहरू पाइन्छन् :
१. विचरण (Variation) - यो भौगोलिक याम्योत्तर र चुम्बकीय याम्योत्तरका मध्य बन्नेवाला कोण छ, जो दिक्सूचकको स्थितिमा निर्भर गर्दछ। वास्तवमा, दिक्सूचकको सुई ठीक उत्तरतर्फ सङ्केत गर्दैन। परिणामत: दिक्सूचकका पाठ्यांकमा त्रुटि आउँछ, जसलाई नाविकगण विचरण र वैज्ञानिकगण दिक्पात (declination) भन्दछन्। यो चुम्बकीय पर्यवेक्षणहरू द्वारा ज्ञात गरिन्छ र सारणिहरूका रूपमा प्रकाशित गर्न दिइन्छ।
२. विचलन (Deviation) - चुम्बकीय याम्योत्तर र दिक्सूचकका पाठ्यांकमा यो अर्का प्रकारको त्रुटि, जसलाई विचलन भन्दछन्, स्थानीय चुँबकीय प्रभावहरू (जस्तै जलयान, वायुयान एव मोटरकारका इस्पातका प्रभाव) द्वारा उत्पन्न हुन्छ। दिक्सूचकधानी (Binnacle or compass stand)मा फलामका टुकडे र त्रुटिपूरक चुंबक लगाने से, यो त्रुटि यथासम्भव टाडा गर्न दिए जान्छ। अवशिष्ट विचलनलाई प्रदर्शित गरती भएको एक सारणी बनाइन्छ। प्रत्येक विचलनसारणी एक विशेष दिक्सूचक संस्थापनका लागि नैं प्रयुक्त हुन्छ।
नाविक दिक्सूचक (Mariner's Compass)[सम्पादन गर्ने]
यो चुम्बकीय दिक्सूचक साधारण यन्त्रको अपेक्षा अधिक जटिल एवं यथार्थ हुन्छ। यस यन्त्रका पाँच मुख्य भाग हुन्छन् : पत्रक, चुम्बकीय सुइयाँ, रत्नित टोपी (jewelled cap), कीलक (द्रत्ध्दृद्य) तथा कटोरा। पत्रकका केन्द्रमा रत्नित टोपी संलग्न रहन्छ तथा पत्रकका तल विभिन्न चुम्बकीय सुइयाँ संलग्न रहन्छ। पत्रक र सुइहरूको यो संपूर्ण व्यवस्था, कटोरेका भित्र एक केन्द्रीय कीलकमा आरोपि यस प्रकार संतुलित रहन्छ कि चाहे पोतको स्थितिमा कति पनि परिवर्तन हो जाए, दिक्सूचक पत्रक सदैव क्षैतिज अवस्थामा रहन्छ।
दिक्सूचक पत्रक कागज अथवा अभ्रकको एक क्षैतिज वृत्ताकार चकती हुन्छ। यो पत्रक, स्पष्ट रूपले प्रधान दिग्बिंदुहरू (cardinal points), उत्तर, पूर्व, दक्षिण र पश्चिम,मा चिन्हित रहन्छ। यी विंदुहरूका मध्यमा अन्त: प्रधान दिग्विंदु उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व र दक्षिण पश्चिम, अंकित हुन्छन्। यिनको मध्यमा पनि अर्धबिंदु र चतुर्थ बिंदु अंकित हुन्छन्। यस प्रकार पुरानो दिक्सूचक पत्रकका किनारमा दिशामा ३२ बिंदु अंकित हुन्छन्, र तिनको बीचको अन्तरका तुल्य हुन्छ।
आधुनिक दिक्सूचक पत्रक पर, उत्तरदेखि आरम्भ गरेर, दक्षिणावर्त दिशामा ०रूदेखि लिएर ३६०रू तकका चिन्ह अंकित हुन्छन्।
दिङ्‌मान (Bearing)[सम्पादन गर्ने]
दिक्सूचक द्वारा उत्तरी दिशा ज्ञात गर्नका पश्चात्‌ यानचालकको उत्तरी दिशा एवं त्यसको अहिलेष्ट मार्गको दिशाका मध्य बन्ने कोणलाई ज्ञात गर्ने आवश्यकता हुन्छ। दिक्सूचक द्वारा ज्ञातको भएको कुनै लक्ष्यको दिशा त्यसका दिक्मान कहलाउँछ। दिक्मान त्यसै प्रकार अंसहरूमा प्रदर्शित गरिन्छ, जस प्रकार रेखागणितमा कोण।
द्रव दिक्सूचक[सम्पादन गर्ने]
यो चुम्बकीय दिक्सूचकको नैं एक प्रकार छ र विश्व उपयोगको वस्तु भएको छ। यसमा चुंबक ताम्रप्लव कोष्ठ, नीलम (sapphire) टोपी तथा अभ्रकपत्रकको सरलतादेखि घूमने व्यवस्था हुन्छ। कटोरा आसुत जल र ३५ प्रतिशत ऐलकोहलका मिश्रणदेखि भरा हुन्छ। यो उपकरण द्रवमा ठीक डूब जान्छ। कीलकमा घर्षण न्यूनतम हुन्छ र चुम्बकीय सुई अवमंदित (damped) दोलन गर्न लाग्दछ, जसदेखि दिक्सूचनपठन अविलंब र सुविधापूर्ण हुन जान्छ।
शुष्कपत्रक अथवा टमसन दिक्सूचक[सम्पादन गर्ने]
यो अङ्ग्रेजी व्यापारी बेडेमा प्रयुक्त हुन्छ तथा द्रवदिक्सूचकदेखि पत्रकका हल्केपन र सुइहरूको दुर्बलतामा भिन्न हुन्छ। यस्ता दिक्सूचक कंपन र अघात द्वारा अत्यधिक विक्षेपित हुन्छन् र एक पल्ट विक्षेपित भएमा पर्याप्त समयका माथिान्त संतुलित अवस्थामा आउँछन्। यसै कारण द्रवदिक्सूचक शुष्कपत्रक दिक्सूचकको अपेक्षा अत्यधिक उपयोगी छ।
घूर्ण चुम्बकीय दिक्सूचक[सम्पादन गर्ने]
यो विशेष प्रकारको चुम्बकीय दिक्सूचक छ। यसमा आवर्तन त्रुटीहरू हुँदैनं र यस कारण द्रुत आवर्तन (rapid turns)लाई यो यथार्थतापूर्वक निर्देशित गर्न सक्छ। घूर्णंचुम्बकीय दिक्सूचकमा एक स्वत:चालित घूर्णदर्शी चुम्बकीय व्यवस्थाका संरेखण (alignment)मा रखा रहन्छ। यस प्रकार घूर्णाक्ष दिक्सूचक र चुम्बकीय दिक्सूचक एक यन्त्रमा संयोजित गरिदिए जान्छन्, जसदेखि बाह्य समंजनको कुनै आवश्यकता छैन रहती।
भूप्रेरण दिक्सूचक (Earth Induction Compass) - यो पनि चुम्बकीय दिक्सूचक छ, जसको कार्यप्रणाली पृथ्वीका चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा प्रेरित विद्युद्वाहक बल (induced e.m.f,)को मापमा आधारित छ। यसमा एक कुंडली हुन्छ, जो ऊर्ध्वाधर अक्षमा घूर्णन गर्दछ। यसको उपयोग मुख्यत: विमानचालक गर्दछन्।
दस्ती दिक्सूचक (Hand compass), समपार्श्वीय दिक्सूचक (Prismatic compass), वायुयान दिक्सूचक (Air-craft compass), सर्वेक्षण दिक्सूचक (Surveyor's compass), टैंक दिक्सूचक (Tank compass) प्रभृति, चुम्बकीय दिक्सूचकका नैं विभिन्न प्रकार छ।
घूर्णाक्ष दिक्सूचक[सम्पादन गर्ने]
यो अचुम्बकीय दिक्सूचक छ, जो भ्रममान चकती (disc)का सिद्धान्तमा कार्य गर्दछ। यसको उपयोग नौबेडेका पोतहरूमा गरिन्छ। यसमा एक घूर्णदर्शी हुन्छ, जो ८,६०० घूर्णन प्रति मिनटको चालदेखि प्रत्यावर्ती धारा द्वारा चालित हुन्छ। यसको कार्यसिद्धान्त पृथ्वीका घूर्णनमा आधारित छ। यस यन्त्रका लागि विचरण र विचलनका कुनै संशोधनको आवश्यकता हुँदैन। यो यथार्थ उत्तर दिशालाई सूचित गर्दछ। पोतहरूमा चुम्बकीय दिक्सूचकहरूका स्थानमा यसको उपयोग अत्यधिक हुँदैछ।
रेडियो दिक्सूचक[सम्पादन गर्ने]
यो पनि अचुम्बकीय दिक्सूचक छ। यो जस रेडियो स्टेशनदेखि समस्वरित (tuned) गरिन्छ, त्यो भन्दा सम्बधित दिशा सूचित गर्दछ। यसको रूप साधारणतया पाश एरियल (loop aerial) सदृश हुन्छ, जस्तो ती घरेलू रेडियो सेटहरूमा प्रयुक्त हुन्छ जसमा बाह्य एरियल छैनते। रेडियो दिक्सूचक द्वारा धेरैेरे व्यक्तिहरूको जीवन समुद्रमा बचाया जा सका छ।
सूर्य अथवा तारा दिक्सूचक[सम्पादन गर्ने]
यो सूर्य दिशाको सहायतादेखि यथार्थको उपसन्न दिशा ज्ञात गरनको यन्त्र छ। सूर्य दिक्सूचक विशेषत: ध्रुवीय उडान (polar flights)का लागि लाभप्रद हुन्छन्। यहाँ चुम्बकीय विचरण र निदेशक बलका परिवर्तनका कारण चुम्बकीय दिक्सूचकको प्रयोग अत्यधिक कठिन हुन्छ।
विकिमिडिया कमन्समा कम्पास सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=कम्पास&oldid=899522" बाट अनुप्रेषित